Tontolon’ny zavakanto Nodimandry Raparivo Ramaheninarivo Roland
Antsirabe… haresaka amin’ny paka : Star tour, Rallye passion 2019, foara,…
Ankoatra ireo fanentanana maro isan-karazany dia misy hatrany ireo hetsika karakaraina any Antsirabe entina hanamarihana ny fetin’ny paska.
Inona no tian’ny ankizy hatao amin’ny fialan-tsasatry ny Paka ?
Efa hiditra amin’ny fialan-tsasatry ny Paka indray ny ankizikely mpianatra amin’io herinandro ambony ho avy io. Nanatona ankizy miisa 7 àry izahay tamin’ity anio ity, ary nanontany azy ireo izay mba tiany hatao avy mandritra io fialan-tsasatry ny Paka io. Ireto ny valin-teny voaangonay.
Paka any Antsirabe Fandrio mialoha ny hotely hamantananao
Toerana tena mahavantana ny maro ny any Antsirabe rehefa vanim-potoana ny paska. herinandro vitsy dia vitsy tokoa sisa dia higadona io fety io.
Mikarama be be kokoa madama, olana aminao ve?
Tranga mety hiseho ao anatin’ny tokantrano ny hoe : betsaka kokoa noho ny karaman’ny lehilahy ny karaman’ny vavy. Mametraka olana ve izany ao anatin’ny tokantrano ? Naka ny hevitry ny lehilahy mahakasika izany izahay.
Dylane, 2 taona…28 kilao! Vary sy laoka no tena tiany
Zaza miavaka amin’ireo mitovy taona aminy i Dylane kely. 2 taona sy 5 volana mantsy izy izao, kanefa milanja 28 kilao.
AKANIN’NY MARENINA ao 67HA : Mahomby eo amin’ny lalao ara-panatanjahantena hatrany ireo ankizy
Ankizy mahay sy mamiratra eo amin’ireo karazana taranja ara-panatanjahantena ireo beazina eny anivon’ny Akanin’ny Marenina (AKAMA) eny 67ha.
“Tanana maitso”, eny Anosibe: Nanamboarana toeram-pilalaovana ireo ankizy sahirana
Toerana fanaovam-baolina no hany fialana voly teo Anosibe. Tsy misy ny foto-drafitrasa natokana ho an’ireo ankizy kely sy ahafahan’izy ireo milalao.
Nodimandry teo amin’ny faha-84 taonany Raparivo Ramaheninarivo Roland, andrarezin’ny fanaovana hosodoko. Omaly maraina no nindaosin’ny fahafatesana ity mpanakanto ity, rehefa narary efa fotoana elaela ihany izay.
Raha ny mombamomba azy no tsiahivina dia tamin’ny taona 1957 no nanomboka nanao hosodoko i Raparivo R.R. Isan’ny hamantarana ny sanganasany ny fanehoany ny trangam-piainana niainany sy ny trangam-piarahamonina amin’ny alalan’ny hosodoko ataony na ny saripika alainy. Efananao mpaka sary tamin’ny gazety « Courrier de Madagascar » sy « Madagascar Matin », nandritra ny 10 taona, tokoa mantsy Raparivo. Nankalaza ny faha-25 taona naha-mpanao hosodoko azy izy, tamin’ny toana 1982, ary efa voatendry ho filohan’ny komity nasionalin’ny « Art plastique » eto Madagasikara. Tamin’ny 24 oktobra lasa teo dia nisy karazana fampirantiana hampahalalana azy sy famarotana ireo hosodokony, tao amin’ny ADMC – CRAAM Ankatso. Ny vola azo tamin’izany dia nentina nanampiana tamin’ny fitsaboana azy. Amin’ny 10 novambra ho avy izao kosa no fotoana handevenana azy.